पोखरामा गीतकार प्रतिष्ठान नेपाल गठन - Pokhara News
पोखरामा गीतकार प्रतिष्ठान नेपाल गठन
चैत्र ३ २०७६, सोमबार १०:४२
पोखरा । पोखराका गीतकारहरुको एक भेलाले गीतकार प्रतिष्ठान नेपाल गठन गरेको छ । पोखरा ग्रैहापाटनमा भएको भेलाबाट प्रतिष्ठान गठन गर्दै पोखराका गीतकारहरु सङ्गठित भएका हुन् ।
भेलाले गीतकार हरिहर खनियाको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरेको हो । लमजुङमा जन्मेर २ दशकभन्दा लामो समयदेखि पोखरामा गीतकारका रुपमा क्रियाशील खनियाको ‘दोष’ एल्बमका ‘मैले बा आमा त्यागेर रोजेको मायाले मलाई धोका दिई…. सबको पिरतीमा दरबार हुन्छ…’ लगायत गीत चर्चित छन् ।
उपाध्यक्षमा ‘मबिना कसै कसैलाई मुस्किल छ पोखरामा ….’ का गजलकार/गीतकार शीतल गिरी, महासचिवमा ‘नानीको चञ्चले बानीले बिगार्यो…., कहिले फूल बनी फक्रेर फुलूँ भन्छ मन…’ लगायत गीतका गीतकार अनुराग अधिकारी चयन भएका छन् । त्यस्तै कोषाध्यक्षमा बिर्सना बस्नेत, सचिवमा रुपिन्द्र प्रभावी तथा सदस्यहरुमा रेशम रचक, देवी त्रिपाठी, मिर्मिसा पराजुली, जीवन पण्डित, प्रकाश अधिकारी र लाल कार्की ‘अञ्जान’ चयन भएका छन् ।
यसै बीच, प्रतिष्ठानको बैठकबाट सरुभक्त, तीर्थ श्रेष्ठ, प्रकट पगेनी ‘शिव’, डा. कृष्णहरि बराल र हरिदेवी कोइरालालाई सल्लाहकार चयन गरिएको छ ।प्रारम्भिक चरण भेलामा उपस्थित गीतकारहरु मध्येबाट समिति गठन भएको र आगामी दिनमा पोखरा र पोखराबाहिर क्रियाशील विभिन्न गीतकारहरुलाई संस्थामा समेट्दै अघि बढ्ने योजना रहेको महासचिव अनुराग अधिकारीले जानकारी दिए । ‘संस्थामा हाल समेटिएकाभन्दा बाहिर धेरै गीतकारहरु छन्’ अधिकारीले भने, ‘संस्थाप्रति सकारात्मक सोच भएका सबै गीतकारहरुलाई क्रमशः आबद्ध गरिने छ ।’
पोखरा रङ्गशालाको सुन्दर दृश्य